Jesosy ao amin'ny Testamenta Taloha | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ao amin'ny Testamenta Taloha, Andriamanitra dia nanambara fa ny olombelona dia mila mpamonjy iray. Nambaran'Andriamanitra izay tokony hitadiavan'ny olona ny mpamonjy. Manome sary be dia be momba ny fisehon'ity Mpamonjy ity isika, mba hahafahantsika mahafantatra azy rehefa mahita azy isika. Azonao atao ny mieritreritra ny Testamenta Taloha ho toy ny sarin'i Jesosy lehibe. Nefa anio, te-hijery ireo sary sasany an'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Taloha isika mba hahazoana sary mazava kokoa amin'ny Mpamonjintsika.
Ny zavatra voalohany henontsika momba an'i Jesosy dia eo am-piandohana ny tantara, ao amin'ny Genesisy 1. Andriamanitra no namorona an'izao tontolo izao sy ny olona. Voataona ho amin'ny ratsy ianao. Avy eo ahitantsika ny fomba namahan'ny olombelona rehetra ny vokatr'izany. Ny menarana no tandindon'izao faharatsiana izao. Hoy Andriamanitra tamin'ilay menarana ao amin'ny andininy 3: «Ary hampifandrafes anao aho sy ny vehivavy ary eo amin'ny zanakao sy ny taranany; hotapahiny ny lohanao, ary hokoratanao amin'ny ombelahin-tongony izy. » Ny bibilava dia mety nandresy an'io fihodinana io ary nandresy an'i Adama sy Eva. Fa Andriamanitra kosa milaza fa ny iray amin'ireo taranany dia handringana ilay bibilava. Izay ho avy ...
1. Hanapotika ny FAHAGAGANA (Genesisy 1:3,15).
Io lehilahy io dia hijaly eo amin'ny menarana; indrindra ny voditongony no haratra. Fa hotorotoroiny ny lohan'ny menarana; Hofoanany ny fiainana mpanota. Hanjaka ny soa. Amin'ity fotoana ity eo amin'ny tantara dia tsy fantatsika hoe iza io ho avy io. Ny lahimatoan'i Adama sy Eva ve sa olona iray tapitrisa taona aty aoriana? Fantatsika anio anefa fa Ilay Iray dia Jesosy izay tonga ary naratra nohomboana tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fantsika nohomboana tamin'ny voditongony. Teo amin'ny hazo fijaliana no nandreseny ilay ratsy. Ankehitriny ny olona dia manantena azy ho avy fanindroany hanala baraka an'i satana sy ny hery ratsy rehetra. Hitako fa tena voatosika hitady an'ity ho avy ity aho satria hamarana ireo zavatra manimba ahy ireo izy.
Nanorina kolontsaina iray manontolo i Isiraely manodidina an'io hevitra io fa misy olona tonga manavotra ny olona amin'ny ratsy ho zanak'ondry. Izany no rafitra sy lanonana sorona manontolo. Imbetsaka ny mpaminany no nanome fahitana momba azy. Ny iray manan-danja amin'ny Mpaminany Mika dia nilaza fa tsy ho avy amin'ny toerana manokana ny Mpamonjy. Tsy avy any New York, LA na Jerosalema na Roma izy. Ilay Mesia ...
2. Ho avy amin'ny toerana iray »avy amin'ny faritany rearmost» (Mika 5,1).
"Ary ianao, ry Betlehema Efrata, izay kely amin'ny tanànan'ny Joda, no hankanesana amiko, Tompoko amin'ny Isiraely ..."
Betlehema no antsoiko hoe "tanàna kely maloto", kely sy mahantra, sarotra hita amin'ny sarintany. Mieritreritra an'ireo tanàna kely toa an'i Eagle Grove any Iowa aho. Tanàna kely sy tsy misy dikany. Betlehema izany. Noho izany dia tokony ho avy izy. Raha te hahita ny Mpamonjy ianao dia jereo ireo olona teraka tao. ("Ny voalohany ho farany".) Dia, fahatelo, ity ...
3. Teraka amin'ny VIRGIN (Isaia 7,14).
"Koa izao no hanomezan'ny Tompo anao famantarana: Indro, bevohoka ny zazalahy ary hiteraka zazalahy izay hantsoiny hoe Imanoela."
Eny, tena manampy antsika hahita azy izany. Tsy ho iray amin'ireo olona vitsivitsy teraka tao Betlehema fotsiny izy, fa hiteraka zazavavy bevohoka tsy manam-bola. Efa miha tery izao ny saha tadiavinay. Azo antoka, isaky ny miverina dia hahita tovovavy milaza ianao fa manan-janaka virjiny, nefa mandainga. Na izany aza, ho vitsy. Saingy fantatsika fa ity Mpamonjy ity dia teraka tamin'ny zazavavy tao Betlehema izay farafaharatsiny nilaza ho virjiny.
4. Nambaran-TANY FAHAFATESANA (Malakia 3,1).
"Indro, te handefa ny irako aho, izay hanomana lalana ho ahy. Ary tsy ho ela ny Tompo tadiavinao dia ho tonga ao amin'ny tempoliny; ary ny anjelin'ny fanekena izay tadiavinao, indro, ho avy izy. hoy Zebaota Tompo. »
Ho avy hahita anao aho, hoy Andriamanitra. Hisy mpitondra hafatra eo alohako hanomana lalana ho ahy. Ka raha mahita olona nanazava aminao fa misy olona ilay Mesia, dia tokony hojerenao fa io no mampiahiahy ny Mesia. Ataovy izay rehetra ilaina raha te hahalala raha teraka tany Betlehema izy ary raha virjiny ny reniny rehefa teraka izy. Ary farany, manana dingana siantifika lalandava isika mba hahafahan'ireo misalasala toa antsika hanamarina raha tena iza ny ahiahiana ho Mesia na tsia. Mitohy ny tantarantsika amin'ny alàlan'ny fihaonana amin'i John Mpanao Batisa izay nanomana ny vahoakan'ny Isiraely ho an'i Jesosy ary nandefa azy ireo tany amin'i Jesosy rehefa niseho Izy.
5. hijaly ho antsika (Isaia 53,4: 6). «
Eny tokoa, nitondra ny aretintsika Izy ary nitaona ny fanaintainantsika ... naratra noho ny helotsika izy ary voafonja noho ny fahotantsika. Ny sazy mihatra aminy amin'ny fandriam-pahalemana ary sitrana amin'ny feriny isika. »
Raha tokony ho Mpamonjy izay manaiky ny fahavalontsika rehetra fotsiny isika dia mahazo fandresena amin'ny ratsy amin'ny alalan'ny fijaliana. Tsy mandresy amin'ny hafa izy, mandresy amin'ny tenany. Sarotra ho antsika ny mieritreritra. Raha tadidinao anefa dia efa nilaza mialoha an'izay zavatra nitranga ihany i Genesis. Hotorotoroiny ny lohan'ilay bibilava, fa ny bibilava kosa hanindrona azy eo amin'ny ombelahin-tongony. Raha mijery ny fivoaran'ny tantara ao amin'ny Testamenta Vaovao isika dia mahita fa i Jesoa Kristy, ilay Mpamonjy, dia nijaly sy maty mba hanomezana ny sazin'ny hadisoanao. Maty izy fa ny fahafatesana no nahazoanao ny tenanao ka tsy tokony handoa azy ianao. Potika ny ràny mba ho voavela heloka ianao, ary rava ny vatany mba hahafahanao mahazo fiainana vaovao ny vatanao.
6. Ny zava-drehetra dia ho AZON'AINA (Isaia 9,5: 6).
Fa naninona i Jesosy no nirahina ho antsika: «Fa zazakely no teraka ho antsika, zazalahy iray no omena ho antsika, ary ny fanjakana dia eo an-tsorony; ary ny anarany dia Mir Advice Advice, God Hero, Mandrakizay, Andrian'ny fandriampahalemana; ka dia hitombo ny fanjakany ary tsy hisy farany ny fiadanana. »
Mila torohevitra sy fahendrena ve ianao momba izay tokony hataonao amin'ny toe-piainana iray? Tonga mpanolo-tsaina mahafinaritra anao Andriamanitra. Manana fahalemena ianao, faritra eo amin'ny fiainana izay miverimberina imbetsaka ary aiza no ilanao hery? Jesosy dia tonga Andriamanitra mahery izay eo anilanao ary vonona hamela ny hoziny tsy hita fetra ho anao. Mila raim-pianakaviana be fitiavana ve ianao izay mitoetra ho anao foana ary tsy handiso fanantenana anao mihitsy, toy ny ataon'ireo raim-pianakaviana biolojika rehetra? Noana ve ianao amin'ny fanekena sy ny fitiavana? Jesosy dia tonga hanome anao malalaka ny Ray izay velona mandrakizay ary tena azo atokisana. Natahotra ve ianao, matahotra sy tsy milamina? Tonga tao amin'i Jesôsy Andriamanitra hitondra anao fiadanana tsy azo resena satria Jesosy mihitsy no andrian'ny fiadanana. Lazaiko aminao izao: Raha tsy nandrisika ny hitady an'io Mpamonjy io aho, dia ho tonga izao aho. Mila izay atolotra azy aho. Manolotra ny fiainana tsara sy manankarena eo ambany fitondrany. Io mihitsy no nambaran'i Jesosy rehefa tonga: "Tonga ny fanjakan'Andriamanitra!" Fomba fiaina vaovao, fiainana izay nanjakan'Andriamanitra ho mpanjaka. Io fomba fiainana vaovao io dia azo alaina amin'izay rehetra manaraka an'i Jesosy.
7. Manorina fanjakana izay TSY MISY AZY (Daniela 7,13: 14).
"Nahita izany tarehy izany tamin'ny alina aho, ary, indro, nisy rahona nitondra ny rahona tahaka ny zanak'olombelona, ​​dia nankeo amin'ilay taloha, ary nentina teo anatrehany. Nanome hery sy haja ary fanjakana izy io mba hanompoana ny olona rehetra sy ny olona avy amin'ny fiteny samihafa. Mandrakizay ny fahefany ary tsy ho levona, ary tsy misy farany ny fanjakany. »
nataon'i John Stonecypher